'' သင်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို အချိန်တိုအတွင်း မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အချိုးအစားကျ လှပလာစေမည့် အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်း ''
သင်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို အချိန်တိုအတွင်း မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အချိုးအစားကျ လှပလာစေမည့် Aviance Sylm Weight Management အကြောင်းကို အသေးစိတ် မိတ်ဆက် တင်ပြပေးလိုပါသည် ။
- သင်၏ အ၀လွန်နေသည့် ခန္ဓာကိုယ် ပုံပမ်းသဏ္ဍာန်ကို သင်တကယ်ဘဲ မုန်းတီးစိတ်ကုန်ပြီး လူကြားထဲမသွားရဲလောက်အောင် စိတ်ဓာတ် ကျဆင်းနေပါသလား ... ?
- လှပ ခေတ်မှီသော ဆန်းသစ်သော ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းဆန်းများစွာ ကို စိတ်ဝင်စားပါလျှက်နှင့် ခြေလှန်းသစ် မချနိုင် ဖြစ်နေပါသလား ... ?
သင်၏ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်ထဲ မှ သင် အမှန်တယ် တမ်းတနေသည့် ခန္ဓာကိုယ် အဆီကျ သွယ်လျ လှပမှုများစွာကို လက်တွေ့ ဘ၀မှာ အမှန်တကယ် ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ရာ အတွက် Aviance Myanmar မှ ... Aviance Sylm ... Weight Management Product များကိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့် သင်၏စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်ထဲမှ ရုပ်သွင်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ပုံဖော်ထုဆစ် ဖန်ဆင်းရယူ နိုင်တော့မှာ အသေအချာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ...
Aviance Slym Weight Management ...
Aviance Slym Product များသည် လူ၏ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချပေးရုံမျှမက၊ ခန္ဓာကိုယ်အဆီကျပြီး သွယ်လျလှပစေသည့်အပြင်၊ ခန္ဓာကိုယ် အချိန်ကြာမြင့်စွာ လှပစေရန်ကိုပါ ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝမရှိဘဲ အချိန်တိုအတွင်း လူမပင်ပန်းဘဲ သက်တောင့်သက်သာ ရှိစွာဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် သွယ်လျ လှပစေမည့် အထိရောက်ဆုံးသော သဘာဝ ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများဘဲ ဖြစ်ပါသည် .....
ထို့အတွက် ... Aviance Sylm Weight Management Product များ ကို သင် ကိုယ်တိုင် စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့် စတင် သုံးစွဲသည့် နေ့မှ စပြီး သင့် ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ခံစားခဲ့ရသမျှ သင်၏ စိတ်ခံစားမှုများ အားလုံး ကို လျစ်လျူရှုပြီး ... အလှဆုံး ဘ၀သစ် ကို ယခု ဘဲ ခြေလှန်းသစ် ဖြင့် လျှောက်လှမ်းကြည့်လိုက်ကြပါစို့လားနော် ...
ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကျ လှပစေဖို့ .....
- လူ မပင်ပန်းဘဲ အချိန်တိုအတွင်း သက်တောင့်သက်သာဖြင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ် သွယ်လျ လှပစေနိုင်ဖို့ရာ နည်းလမ်းများစွာကို ဘယ်လို ပင် သုံးသုံး ငွေကုန်ကြေးကျ များခဲ့ခြင်းသာ အဖတ်တင်ပြီး စိတ်/လူ ပင်ပန်းပြီး ခဲ့ရသမျှ အချည်းနှီး အရာမထင် ဖြစ်နေပါ သလား ...
အရိုးသားဆုံး ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမည် ဆိုပါလျှင် ....
- ပိန်ချင်သောသူ အများစုသည် တစ်သက်လုံး မဆင်မခြင် စားလာခဲ့သည့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အသည်းအသန် ပိန်ချင်သည့် စိတ်ဆန္ဒရှိလာပြီဆိုမှ အချိန်တိုအတွင်း မစားမသောက်ဘဲ ကြိတ်မှိတ်နေသော နည်းလမ်းကို မှားယွင်းစွာ ကျင့်သုံးလေ့ရှိကြပြီး အချိန်ကာလကြာရှည်စွာကျင့်သုံး ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် လူအများစုမှာ အောင်မြင်မှု မရရှိနိုင်ကြခြင်းပင် ဖြစ်သည် ...
အဘယ့်ကြောင့် ဖြစ်ရပါသနည်း ...
စားကောင်းသောက်ဖွယ် မကြိုက်တဲ့သူကလည်း ခပ်ရှားရှား၊ အစားမက်တဲ့သူနဲ့ မမက်တဲ့သူ နှိုင်းယှဉ်ကြစတမ်း ဆိုပါက အစားအသောက် မက်တဲ့သူ အုပ်စုတွေက များများဘဲ ဖြစ်သလို ... ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုက်တတ်တဲ့ စားစရာ အများစုဆိုတာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အလှကို မဖြစ်မနေ ပုံပျက်ယိုယွင်းသွားစေမယ့် ... အဆီအနှစ် များများပါသည့် စားသောက်ဖွယ်ရာတွေနဲ့ Fast Food တွေဘဲ မဟုတ်ပါလားနော် ...
ထိုသို့သော ကိုယ်နှစ်သက် မက်မောစွာ အရသာ ရှိရှိ ကြိုက်နှစ်သက်စွာနဲ့ စားသောက်တတ်တဲ့ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေကို ဘယ်လိုလူကများ ဘယ်လောက်ဘဲ ပိန်ချင်ချင် သိပ်စားချင်နေတဲ့ စိတ်ဆန္ဒ တစ်ခုကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်နှစ်ခါလောက်များ အောင်အောင်မြင်မြင် ထိန်းချုပ်နိုင်မှာတဲ့လဲ ...
အများဆုံး ရရှိခံစားခဲ့ကြရတဲ့ ရလာဒ်တွေ ကတော့ ...
အချိန်တိုအတွင်းမှာ အစားအသောက်ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခကို မခံနိုင်စွာဖြင့် ထိန်းချုပ်ခဲ့ရသည်နှင့် မတန်အောင် အဆမတန် ပြန်စားသောက်မိသည့်အတွက် အဆမတန် ပြန်ဝတက်လာခြင်း နှင့် ပုံမှန်စားရသည့် အစာအာဟာရရှိမှ ကျန်းကျန်းမာမာနှင့် လည်ပတ်နေနိုင်မည့် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခမျာ လုံလောက်မျှတသော အစာ အာဟာရဓာတ်ကို ဖူလုံစွာမရသည့်အတွက် ... ခွန်အား ယုတ်လျော့ ချိနဲ့လာရခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါသည် ...
အစားအသောက်လည်း မပျက်သလို၊ ခွန်အားလည်း မယုတ်လျော့နိုင်စေဘဲ အချိန်မကုန် လူမပင်မပန်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အဆီကျ သွယ်လျလှပစေမည့် နည်းလမ်းသစ် တစ်ခုနှင့် မိတ်ဆက်ပေးမည်ဆိုပါက သင်စိတ်ဝင်စားပါမည် လား ?
Aviance Slym Weight Management ... ဆိုသည်မှာ .... ကျွန်ုပ်တို့ နေ့တဓူဝ စားသောက်နေသည့် အစာအာဟာရဓာတ် များထဲ မှ ... ကောင်းကျိုးအာနိသင်ခံစားရစေမည့် အာဟာရဓာတ်များကိုသာ လက်သင့်ခံစေ၍ ခန္ဓာကိုယ် အလှကို ပျက်ယွင်းစေရန် အတားအဆီးမရှိ အဆမတန် ၀င်ရောက်လာမည့် ... အဆီဓာတ်များနှင့် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ်များကို ထိရောက်စွာ ဟန့်တားပေးထားသည့် နည်းစနစ်ဖြင့် ကာကွယ် ပေးရုံမျှမက လူ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း စုပုံလာမည့်အဆီများအားလုံးကိုပါ ချေဖျက် လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သော .... နည်းစနစ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဉ် စားသောက်နေသော ပုဇွန် အခွံ၊ ဂဏန်း အခွံ၊ စပျစ်စေ့ စသည့် သဘာဝဆေးဝါး ဓာတ်စာများစွာမှ အထူး သီးသန့်ဖော်စပ် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ခန္ဓာကိုယ် အလှကို နည်းစနစ်တကျဖြင့် ထိမ်းသိမ်းနိုင်စေမည့် ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများပင် ဖြစ်သည် ....
မည်သို့မည်ပုံ သောက်သုံးရပါမလဲ .... ?
Aviance Sylm အဆီကျဆေး မှာ Fatt Bloc, Carbo Bloc ဆိုတာနဲ့ Fatt Burnn ဆိုပြီး သုံးမျိုးပေါင်းစပ် သောက်သုံးရတာ ဖြစ်ပါသည်... သောက်သုံးပုံလေးကတော့ အစာ မစားခင် တစ်နာရီ အလိုမှာ...ကိုယ် စားလိုက်တဲ့ အစားအစာတွေ ကို အဆီမဖြစ်အောင် ဟန့်တားပေးစေမယ့် Fatt Bloc ဆိုသည့် ဆေးနှစ်လုံးကို ရေတစ်ဖန်ခွက်အ၀နှင့် ပထမဆုံး သောက်သုံးရမှာ ဖြစ်ပြီး ...
စားခါနီးဆဲဆဲ ထမင်းပန်းကန်ရှေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ... လူတံတွေးနဲ့ ထိရင် အရည်ပျော်ပြီး ကာဗိုဟိုက်ဒရိုတ်ဓာတ်တွေအဖြစ် ပြောင်းသွားစေမယ့် ဓာတ်တွေကို ဟန့်တားပေးမယ့် ... Carbo Bloc ဆိုသည့် ဆေးနှစ်လုံး .... ကို သောက်သုံးရမှာ ဖြစ်သလို ...
အစာစားပြီးချိန် မှာတော့ ... ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရှိနှင့် နေပြီးသား အဆီပိုတွေနဲ့ နေ့စဉ် ထပ်ထပ် စားသုံးနေသည့် အစာအာဟာရတွေကနေ အဆီပိုအဖြစ် အသစ်ထပ်ပြီး နေရာယူလာ နိုင်တဲ့ အဆီအသစ်တွေ ထပ်ဖြစ်မလာအောင် မလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုတွေ ကို လောင်ကျွမ်းပေးစေမယ့် ... Fatt Burnn ဆိုသည့် ဆေးနှစ်လုံး ရေအ၀ နှင့် သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါသည် ...
Aviance Sylm Weight Management သောက်သုံးနေတဲ့ အချိန်တလျှောက်လုံးမှာ တစ်နေ့လျှင် ရေပမာဏ အနည်းဆုံး ( ၂ ) လီတာခန့်မဖြစ်မနေ သောက်သုံး ရမည် ဖြစ်သလို ... Weight Management သည် အစာစားချင်စိတ်ကို ဟန့်တားပေးသော ပိန်ဆေး မဟုတ်ပါသဖြင့် .... အစာစားလို စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာပါက .... ဘေးဥပဒ် လည်း မဖြစ်စေနိုင် သလို လူကိုလည်း အဆီမတက်စေသော လတ်ဆတ်သည့် သစ်သီးဝလံများကို ရေများများနှင့် အ၀စားသောက်ပေးနိုင်လျှင် ပိုမို အကျိုးထူး ရရှိစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည် ....
မည်သို့သော ပညာရှင်တွေကများ ဖော်စပ် ထုတ်လုပ်ထားပါလိမ့် ... ?
ကမ္ဘာတ၀ှမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အရှိဆုံးသော နိုင်ငံများစွာမှ ထူးချွန်သိပ္ပံ ပညာရှင်များစွာ၏ အသေးစိတ် စူးစမ်း လေ့လာရှာဖွေထားသော တွေ့ရှိချက်များစွာဖြင့် လူသုံးကုန်၊ အိမ်သုံးကုန်၊ အလှကုန်နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါး ဓာတ်စာများစွာ ကို နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်တွင် အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက် ရှိသော Unilever Luxury Division ကြီး မှ Aviance အမည်နာမဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိ အကောင်းဆုံးသော ရုပ်ဆင်း အင်္ဂါများကို နုပျိုစေမည့် သဘာဝ စားသောက်ကုန်များနှင့် တိုင်းရင်းဆေးဝါး ထုတ်ကုန် များစွာတို့ကို ကုန်ကြမ်းမှ ကုန်ချောဖြစ်သည်အထိ ငွေသန်းပေါင်းများစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သလို SEAC ( or ) Safety and Environment Assurance Center မှ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားပြီးသော ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ထုတ်ကုန်များ ဖြစ်ပါသည် ....
ဤကဲ့သို့လူအများစု အောင်အောင်မြင်မြင် ထိထိရောက်ရောက် ၀ိတ်မချနိုင်ကြသည့် အဓိက ပြဿနာနှင့် Aviance Sylm Weight Management ထုတ်ကုန်များစွာ၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာ ဗဟုသုတများစွာကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်းနှင့် သေသေချာချာ သိရှိ နားလည် သွားပြီဆိုပါက သင့်အတွက် အလျှင်မြန်ဆုံးနှင့် အထူးခြားဆုံးသော အကျိုးသက်ရောက်မှု အာနိသင် မုချ ဧကန် ရှိစေနိုင်မည့် .... Aviance Weight Management ... Product များစွာ ၏ အမှန်တကယ် ထူးခြားမှု စွမ်းအား အာနိသင်ကို လက်တွေ့ဘ၀မှာ အမှန်တကယ် ဟုတ် / မဟုတ် ၊ ဖြစ်နိုင် / မဖြစ်နိုင် ဆိုတာကို သင် ကိုယ်တိုင် သောက်သုံးကြည့်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်တွေ့ သိရှိလာပါလိမ့်မည် ...
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကို အချိန်မကုန်၊ လူ မပင်ပန်းဘဲ သက်တောင့် သက်သာ ရှိစွာဖြင့် အဆီကျ သွယ်လျ လှပနိုင်စေဖို့ ...Aviance Weight Management ကို.... ယခုဘဲ ရွေးချယ်ကြည့်ကြပါစို့ ...
Aviance Weight Management ကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် လှပစေရုံ သက်သက်သာမက ... လူရော စိတ်ပါ ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု တိုးပွားလာစေသည့် ကောင်းကျိုး ချမ်းသာများစွာကိုပါ ရရှိခံစားရမည် ဖြစ်ပါသည် ...
မှတ်ချက် ။ ။ (Over Weight ခန္ဓာကိုယ်များ အတွက် အ၀လွန်ခြင်းဆိုသည်မှာ နှလုံးရောဂါ ၊ ဆီးချိုရောဂါ ၊ လေငန်း ရောဂါနှင့် အခြားသော နာတာရှည် ရောဂါများစွာ ကဲ့သို့ ဖွဲရှိရှိနှင့် အချိန်ယူပြီး ပြုပြင် ထိန်းသိမ်း သွားရမည်သာ ဖြစ်ပါသည် ။ )
Aviance Slym Weight Management ... ကို ဘယ်မှာ ၀ယ်ယူနိုင်မလဲ ...
Aviance Myanmar ... Fan Page နှင့် GINGER Beauty Land Fan Page များ ၏ Mail Box များသို့ ဆက်သွယ် Mail ပို့၍ Pre - Order စနစ်ဖြင့် ငွေလွှဲပြီး Online မှ တဆင့် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်သလို ... လူ ကိုယ်တိုင် လာရောက် မှာယူလိုပါက
အမှတ် ( ၈၇ ) ၊ ဧရာဝတီလမ်း နှင့် ဆင်မင်းလမ်းထောင့် ၊
အကယ်ဒမီဆေးရုံ အနီး ၊ ဆင်မင်းဈေးမှတ်တိုင် ၊
အလုံမြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ( 09 ) 51 26835 ... သို့ ဆိုင်တိုင်ရာရောက် လူ ကိုယ်တိုင် လာရောက် ဆက်သွယ်၍ မှာယူ ရရှိနိုင်ပါသည် ...
Ginger Beauty Land အကြောင်း ကတော့ ....
2005 ခုနှစ် မေလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး GINGER အမျိုးသမီးသီးသန့် ကိုယ်ကာယ အလှသင်တန်း၊ အထူးအာမခံနှင့် ခန္ဓာကိုယ် အဆီချပေးခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် မျက်နှာနှင့် အသားအရေ ပြုပြင်ပေးခြင်း စသည့် အလှအပ ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများစွာ ကို ( ၈ ) နှစ် ကျော် ( ၉ ) နှစ် နီးပါး အချိန်ကြာ ခေတ်ရေစီးကြောင်း နှင့် အညီ အမျိုးသမီးများစွာ ၏ ယုံကြည်မှု တစ်ခုကို အဓိက ရှေးရှု၍ တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လာခဲ့သည့် မျက်နှာနှင့် ခန္ဓာကိုယ် အလှအပဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များစွာကို အထူး တာဝန်ယူ လက်ခံဆွေးနွေးပေးပြီး Customer များစွာ၏ စိတ်ဆန္ဒအမျိုးမျိုးအလိုက် အဆင်ပြေသင့်လျော်မည့် နည်းလမ်းများစွာကို အထူး အကြံပေးပြီး ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပေးလျက်ရှိသော အလှအပ ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည် ...
GINGER Beauty Land ကို ပိုမို အသေးစိတ် လေ့လာလိုသူများ အတွက် ...
Website - http://www.gingerbeautyland.com
Aviance Weight Management ... ရောင်းချပေးသည့် GINGER Beauty Land ၏ ရည်ရွယ်ချက် ....
2005 ခုနှစ် မေလ ( ၁ ) ရက်နေ့ မှ စတင်ပြီး ( ၈ ) နှစ် ကျော် ( ၉ ) နှစ် နီးပါး ... ဖွင့်လှစ်လာခဲ့သည့် ... GINGER အမျိုးသမီး သီးသန့် ကိုယ်ကာယ အလှ၏သင်တန်း ...( ၇ ) နှစ်ကျော် လုပ်ကိုင် လာခဲ့သည့် အထူးအာမခံနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အဆီချပေးခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ... ( ၄ ) နှစ် နီးပါး လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည့် မျက်နှာနှင့် အသားအရေပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးသည့် လုပ်ငန်းများ တလျောက် မှာ ... မည်သည့် အဆီကျသောက်ဆေး / လိမ်းဆေး / Facial Skincare များ ကို က အစ .. မညွှန် / မရောင်း ချပေးခဲ့ဖူးပါသော်လည်း ... အချိန်နှင့် အမျှ တိုးတက် ပြောင်းလဲနေပါသော ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် လိုအင်ဆန္ဒအမျိုးမျိုး မတူညီနိုင်သည့် မိတ်ဟောင်း / မိတ်သစ် များစွာ၏ အချိန်လည်းမပေးနိုင် ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်အတွက် အပင်ပန်းလည်း မခံနိုင်စွာဖြင့် အဆီကျဆေး သောက်ချင် / အိမ်မှာ လိမ်းချင်ကြတဲ့ အကြောင်းနှင့် မျက်နှာနှင့် အသားအရေ အမျိုးမျိုးအလိုက် ဘယ်လို Skincare မျိုး သုံးရတာ အဆင်ပြေမလဲ .... စသဖြင့် မကြာခဏ မေးမြန်းတတ်ကြသော မိမိ တို့နေအိမ်မှာတင် မျက်နှာနှင့် ခန္ဓာကိုယ် လှပတင်းရင်း နုပျိုနိုင်စေရန် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းလိုကြသော စိတ်ဆန္ဒများစွာကို ဖြည့်ဆည်းပေး လိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ....
Aviance Weight Management ... ၏ ကောင်းကျိုးများစွာ ကို အမှန်တကယ် ရရှိ ခံစားနိုင်ရန် အတွက် ...
သင် ၏ အသက် ၊ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် သင်စတင်ဝလာသည့် အချိန်ကာလနှင့် သင်နေထိုင် စားသောက်လျှက်ရှိသည့် အစားအသောက်ပမာဏနှင့် တန်ပြန် လိုက်လျော ညီထွေမှုရှိသည့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမျိုး ရှိ / မရှိ တို့ကို ပထမဆုံး ကြိုတင် ပြောပြထားရန် လိုအပ်သလို သင် ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကအစ ရောဂါ ရှိ / မရှိ ဆိုတာတွေအပြင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားမှုဖြင့် သင် လက်ရှိ သောက်သုံးနေရသော ဆေးဝါးများနှင့် အခြား ပိန်ဆေးများ/ပိန်စေနိုင်သည့် နည်းလမ်းများစွာ ကျင့်သုံးခဲ့သည်များ ရှိခဲ့လျှင်လည်း မည်မျှ ကြာကြာအထိ သောက်သုံးခဲ့ပြီး မည်သို့သော ကောင်းကျိုး/ဆိုးကျိုး များစွာကို ရရှိ ခံစားခဲ့ဖူးခြင်း စသည်များကိုပါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြောပြဆွေးနွေးပြီးမှ သောက်သုံးသင့်သလို စတင်သောက်သုံးပြီ ဆိုပါ ကလည်း လိုက်နာရမည့် အချက်အလက်များစွာကို အသေးစိတ် တိတိကျကျ လိုက်နာ ကျင့်သုံးပြီး အချိန် မှန်မှန် သောက် သုံးခြင်းဖြင့် ကောင်းကျိုး ချမ်းသာများစွာ ကို အချိန် ကာလ ကြာရှည်စွာ ရရှိခံစားရမည် ဖြစ်ပါသည် ....
GINGER Beauty Land ၏ After Sale Service ပေးလိုသည့် စေတနာ ....
Aviance Product များစွာ ၀ယ်ယူ သုံးစွဲနေကြသည့် Customer များစွာ နှင့် အချိန်ကာလ ကြာရှည်စွာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့သော ဆက်ဆံရေးနှင့် လူ ယုံကြည်မှုများစွာကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ပိုမို တည်ဆောက်လိုပါသောကြောင့် .... မိမိတို့ဝယ်ယူ သုံးစွဲထားသည့် Product များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဆင်မပြေမှုများ ရှိပါက ... မိမိတို့ စတင် မှာယူသုံးစွဲခဲ့သည့်နေ့နှင့် မိမိတို့ပုံမှန် နေထိုင် စားသောက်ပုံများစွာနှင့်တကွ ထပ်မံ အသေးစိတ်ဖော်ပြ၍ Message များပေးပို့ပြီး အချိန်မရွေး နေရာမရွေး အကြံဥာဏ်များ တောင်းခံနိုင်သလို အခြားသော သုံးစွဲမှု အဆင်မပြေ ရလာဒ်များ ရှိပါကလည်း လက်ခံ ဆွေးနွေးပြီး ဖြေရှင်းပေးလိုပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် ပြောကြားလိုက်ပါသည် ရှင့် ...